ဘုရားစာတရားစာတွေရှယ်ကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ ဖြူဖြူထွေး – Maythadin
ဖြူဖြူထွေးကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် Follower ၈သန်းကျော်ရှိသည့် Social Influencer တဦးဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးတွင် ပြည်သူနှင့်တသားတည်း ရပ်တည်မှုမရှိသလို ဆန္ဒပြပွဲများတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ရပ်တည်မှု မှန်ကန်သူ မဟုတ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခံရကာ လူမှုရေး
ဘုရားတရားစာတွေ ရှယ်ရင်း ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ကို ပြန်လည်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ… သူမ ရဲ့ဖေ့ဘုတ် Myday မှာ လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း မှန်တာကိုလုပ်ပြီး ပွင့်လင်းသူထက် မဟုတ်မမှန်တာလုပ်ပြီး ဟန်ဆောင်ကောင်းသူက ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်. .. ကမ္ဘာပေါ်မှာ မေတ္တာတရားနဲ့မတန်တဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။
သူတစ်ပါးက ပို့ပေးလွှတ်တဲ့ မေတ္တာတရားကို မခံယူတတ်တဲ့ သူပဲရှိတာပါ ဆိုတဲ့ တရားစာလေးတွေကို တင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Phyu Phyu Htwe crd
ဘုရားတရားစာေတြ ရွယ္ရင္း ေဖ့ဘုတ္ေပၚကို ျပန္လည္ေရာက္လာခဲ့ျပန္ပါၿပီ… သူမ ရဲ႕ေဖ့ဘုတ္ Myday မွာ လူေတြရဲ႕ေဝဖန္မႈေတြနဲ႕ပက္သက္ၿပီးေတာ့လည္း မွန္တာကိုလုပ္ၿပီး ပြင့္လင္းသူထက္ မဟုတ္မမွန္တာလုပ္ၿပီး ဟန္ေဆာင္ေကာင္းသူက ပိုၿပီးေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္. .. ကမာၻေပၚမွာ ေမတၱာတရားနဲ႕မတန္တဲ့သူဆိုတာ မရွိပါဘူး။
သူတစ္ပါးက ပို႔ေပးလႊတ္တဲ့ ေမတၱာတရားကို မခံယူတတ္တဲ့ သူပဲရွိတာပါ ဆိုတဲ့ တရားစာေလးေတြကို တင္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။